Saturday March 31, 2018 - 12:09:49 in Wararka by Super Admin
Kadib isbuuc weeraro xiriir ah ay wajahayeen ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ayay ugu dambeyn dib ugu laabteen halkii ay kasoo duullaan tageen ee magaalada Beled Weyne.
Wararka ka imaanaya gobola Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo isbahaysanaya oo isugu jira Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ay ka laabteen deegaanno dhowr ah oo Beled Weyne hoos yimaad.
Wariye Nuur Cali Warsame oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa soo sheegay in ciidamada huwanta ah ay shalay gelinkii dambe ku aruureen saldhigyo ay ku leeyihiin Janta Kuundisho iyo garoonka diyaaradaha Beled Weyne.
Dhinaca kale weerar dhabbagal ah oo ciidamada maamulka HirShabelle lagula beegsaday gobolka Hiiraan ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 4 Askari sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa wadada ugalay maleeshiyaadka oo raacda reeb u ahaa ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kuwa Jabuuti xilligii ay kasii firxanayeen deegaannada dhaca duleedka Beled Weyne.
Isbuucii lasoo dhaafay silsillado weeraro ah oo xoogaga Al Shabaab ay ciidamada itoobiya iyo kuwa Dowladda Federaalka kula beegsadeen gobolka Hiiraan ayaa sababay dhimashada tobanaan askari iyo dhaawaca tira kale.
Khasaaraha ugu daran ayaa gaaray maleeshiyaadkii dal aqoonka u ahaa ciidamada shisheeye, Cismaan Jeyte oo ku magacaaban guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa horay u sheegay in ay bilaabeen howlgal ballaaran oo lagu furayo wadada laamiga ah ee xiririirisa magaalooyinka Buula Burde iyo Beled weyne balse warkaas ayaa beenoobay.